လူ့ ဦး နှောက်တွင် Striatal dopamine D2 / D3 ဓာတ်ပေါင်းဖိုကိုကဖိန်းဓာတ်တိုးစေနိုင်သည် (2015) - Your Brain On Porn
ကဖိန်းဓာတ်ကလူ့ဦးနှောက် (2) တွင် striatal dopamine D3 / D2015 အဲဒီ receptor ရရှိမှုတိုးပွါး
ကိုးကား: Translational စိတ်ရောဂါကုသမှု (2015) 5, e549; Doi: 10.1038 / tp.2015.46
အွန်လိုင်းAprilပြီလ ၁၄ ရက်၊
nd Volkow1, GJ ဝမ်1, J ကို Logan2, D ကို Alexoff2, JS မုဆိုး2, PK Thanos2, C ကို Wong က1, V Casado3, S ကို Ferre4 နှင့် D Tomasi1
1Intramural သုတေသနအစီအစဉ်, အမျိုးသား Institute မှအရက်အပေါ်အလွဲသုံးမှုနှင့်အရက်, Bethesda, MD ယူအက်စ်အေ
2Brookhaven အမျိုးသားဓာတ်ခွဲခန်း, Upton, နယူးယော့, အမေရိကန်နိုင်ငံ
3ဇီဝဓါတုဗေဒနှင့်မော်လီကျူးဇီဝဗေဒဌာန, ဘာစီလိုနာ၏တက္ကသိုလ်, ဘာစီလိုနာ, စပိန်
4Intramural သုတေသနအစီအစဉ်, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှု, Baltimore အပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, MD ယူအက်စ်အေ
စာပေးစာယူ: ဒေါက်တာ ND Volkow, Intramural သုတေသနအစီအစဉ်, မူးယစ်ဆေးဝါးအလွဲသုံးမှုအပေါ်အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်အင်စတီကျု, 6001 အလုပ်အမှုဆောင် Boulevard, ROOM တွင် 5274, Bethesda, MD 20892, USA ။ E-mail ကို: [အီးမေးလ်ကိုကာကွယ်ထားသည်]
၂၀၁၄ ဒီဇင်ဘာ ၂၉ ကိုလက်ခံရရှိသည်။ 29 ဖေဖော်ဝါရီလ 2014 လက်ခံခဲ့သည်
ကဖိန်းဓာတ်သည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်ကျယ်ပြန့်စားသုံး psychoactive ပစ္စည်းဥစ္စာ, နိုးနိုးကွားကွားမြှင့်တင်ရန်နှင့်ရွှင်လန်းမြှင့်တင်ရန်အသုံးပြုသည်။ အခြားအပါတီအား-မြှင့်တင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (စိတ်ကြွဆေးနှင့် modafinil) ကဲ့သို့ပင်ဖိန်း adenosine တစ်ဦးက antagonizing ကအများစုမထားတဲ့ဦးနှောက်ထဲမှာအချက်ပြ dopamine (DA) တိုးမြှင့်2A receptors (က2AR ကို) ။ ကဖိန်းဓာတ်လူသားများအားဖြင့်စားသုံးသည့်ဆေးများမှာ, DA လွှတ်ပေးရန်ဒါမှမဟုတ်သူတို့ကို modulate ရာ adenosine receptors နှင့်အတူ၎င်း၏အပြန်အလှန်မှတဆင့် postsynaptic DA receptors တွေရဲ့လုပ်ငန်းဆောင်တာ modulates ရှိမရှိတိုးပွါးလျှင်သို့ရာတွင်ထိုသို့မရှင်းလင်းသည်။ ကျနော်တို့ positron ထုတ်လွှတ် tomography အသုံးပြု [11ကို C] raclopride (DA: D2/D3 ကဖိန်းဓာတ် 20 ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုအတွက် striatum အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်တိုးလာလျှင်အကဲဖြတ်ရန် endogenous DA မှအထိခိုက်မခံအဲဒီ receptor radioligand) ။ ကဖိန်းဓာတ် (300 မီလီဂရမ် po) သိသိသာသာ: D ၏ရရှိမှုတိုးလာ2/D3 ရလဒ်များအရအိပ်ယာနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါမှာ putamen နှင့် ventral striatum အတွက်မဟုတ် caudate အတွက် receptors ။ : D အတွက်အပြင်, ဖိန်း-သွေးဆောင်တိုး2/D3 အဆိုပါ ventral striatum အတွက်အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုရွှင်လန်းအတွက်ဖိန်း-သွေးဆောင်တိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏တွေ့ရှိချက်ပုံမှန်အားကိုလောင်ဆေးများမှာလူ့ဦးနှောက်, ဖိန်း, အတွက်, DA: D ၏ရရှိမှုတိုးပွါးကြောင်းညွှန်ပြ2/D3 ကဖိန်းဓာတ်သည်ဤများအတွက် striatum အတွက် DA တိုးမြှင့်တော်မမူကြောင်းညွှန်ပြပေးသော receptors, D ကိုလျော့နည်းသွားလိမ့်မည်2/D3 အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှု။ အဲဒီအစားကျနော်တို့: D တစ်ခုတိုးရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အနက်ကိုဘော်ပြ2/D3 ကဖိန်းဓာတ် (သို့မဟုတ်ဆှဖှေဲ့ပြောင်းလဲမှုများ) နဲ့ striatum အတွက်အဲဒီ receptor အဆင့်ဆင့်။ : D ထဲမှာတိုးအကြားအသင်းအဖွဲ့2/D3 ventral striatum နှင့်ရွှင်လန်းအတွက်အဲဒီ receptor ရရှိနိုင်မှုကဖိန်းဓာတ်အစိတ်အပိုင်းအတွက်, D ကို upregulating အသုံးပြုပုံ arousal မြှင့်တင်ရန်စခွေငျးငှါအကြံပြု2/D3 receptors ။
ကဖိန်းဓာတ်အများဆုံးကျယ်ပြန့်စားသုံး psychoactive ပစ္စည်းဥစ္စာဖြစ်ပါတယ်။1 ၎င်း၏အမူအကျင့်နှိုးဆွသော pharmacological သက်ရောက်မှု DA ပို့ဆောင်ရေးပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် / သို့မဟုတ်ဆိပ်ကမ်းကနေ DA လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့်အချက်ပြ dopamine (DA) ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းမူးယစ်ဆေးနေသောလှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများ (စိတ်ကြွဆေးနှင့် methylphenidate) နှင့် modafinil ၏သူတို့အားဆင်တူသည်။2, 3,4ဒီဆေးတွေ၏ DA-တိုးမြှင့်သက်ရောက်မှုကသူတို့ arousal အခြေခံ5,6နှင့်ဆိုးကျိုးများအားဖြည့်။7, 8, 9, 10 ဆနျ့ကငျြ, preclinical လေ့လာမှုများတစ်ဦးက (ဖိန်းရဲ့ pharmacological သက်ရောက်မှု adenosine receptors ၎င်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကကမကထပြုခဲ့ကြသည်ညွှန်ပြ1 နှင့် A2A Subtype) ။11 တစ်ဦးက၏အထူးသဖြင့်၎င်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း2A receptors (က2Astriatum အတွက် R) က၎င်း၏ dopaminergic ဆိုးကျိုးများအတွက်ပတ်သက်သည်ဟုယူဆရခဲ့သည်။12 locomotor လှုပ်ရှားမှုအတွင်းအလားတူပင်ဖိန်း-သွေးဆောင်တိုး13 နှင့် arousal14 တစ်ဦးကကကမကထပြုခဲ့ခံရဖို့ပေါ်လာ2Aသူတို့တစ်ဦးအတွက်ပျက်ကွက်နေကြသည်အဖြစ် R ကို2AR ကိုကြွက်နောက်ကောက်, နှင့် A ၏ဟူသောအသုံးအနှုနျးအသံတိတ်2Aနျူကလီးယပ် accumbens အတွက်ရေတို hairpin RNA နှင့်အတူ R ကိုနိုးနိုးကွားကွားအပေါ်ဖိန်းရဲ့သက်ရောက်မှုနှင့်အတူနှောင့်ယှက်။15
အဆိုပါ striatum တစ်ဦး၏အမြင့်ဆုံးအဆင့်ဆင့်ဖော်ပြ2Aသူတို့ postsynaptic D နဲ့ Co-ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားရာ R ကို2 receptors (ဃ2R) တစ်ဦးကဖွဲ့စည်း2ARD2R ကို heteromers ။16, 17, 18 allosteric နှင့်ဒုတိယ-messenger ကို interaction က adenosine မှတစ်ဆင့်: D ဖြစ်စဉ်ကိုတားဆီးပေးပါတယ်2R ကိုအချက်ပြ။ ထို့ကြောင့် striatal အာရုံခံထဲမှာတစ်ဦးက2AR ကို agonists D ကိုလျော့ချ2R ကို agonist binding ။19 တစ်ဦးကပိတ်ဆို့ခြင်းအားဖြင့်ဖိန်း,2AR ကို, အ unopposed: D မှတစ်ဆင့်အချက်ပြ DA မြှင့်တင်ရန်နိုင်2R.20 ဒါဟာကနဦး adenosine တစ်ဦး၏ကဖိန်းဓာတ်ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်း postulated ခံခဲ့ရသော်လည်း1 receptors နျူကလီးယပ် accumbens အတွက် DA တိုးမှု,21 ဒီတွေ့ရှိချက်သာဖိန်းဓာတ်၏အလွန်မြင့်မားဆေးများပြီးနောက်ရရှိသောခံခဲ့ရခြင်းနှင့်အခြားသူများ corroborated မခံခဲ့ရပါဘူး။22, 23 [အတူထို့အပြင်တစ်ဦးနှောက်ပုံရိပ်လေ့လာမှု11: D မှ binding များအတွက် endogenous DA နှင့်အတူဝင်ရောက်ယှဉ်ပြိုင်မယ့် radioligand ဖြစ်သောကို C] raclopride,2 နဲ့ D3 receptors (ဃ2/D3R), ပါးစပ်ဖိန်းဓာတ် (200 မီလီဂရမ်) က၎င်း၏ striatum အတွက် binding တိုးမြှင့်ကြောင်းပြသ24 အရာ DA တိုးနှင့်အတူကွဲလွဲနေသည်။ လေ့လာမှုကနေသို့သော်သေးငယ်တဲ့နမူနာအရွယ်အစား (n= 8) က၎င်း၏ယေဘုယျမရှိချေ။ ထို့ကြောင့်ကဖိန်းဓာတ်ကလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာကဖိန်းဓာတ်ရဲ့သတိပေးနခွေငျးသက်ရောက်မှုများအတွက် striatal DA နှင့်လုပ်ဆောင်ချက်၏ယန္တရား (s) ကိုတိုးပွားစေခြင်းရှိမရှိ၏မေးခွန်းကိုရှင်းလင်းရှိနေဆဲဖြစ်ပါသည်။
ကဖိန်းဓာတ်ကလူ့ဦးနှောက်ထဲမှာ DA တိုးပွါးခြင်းရှိမရှိအကဲဖြတ်ဖို့ကျနော်တို့ positron ထုတ်လွှတ် tomography (PET) အသုံးပြု [11ကို C] raclopride25 နှင့်တစ်ချိန်ကရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်တစ်ကြိမ်ခံတွင်းကဖိန်းဓာတ်နှင့်အတူ 20 ကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုစမ်းသပ်စစ်ဆေးပါတယ်။ ကဖိန်းဓာတ်၏တစ်ဦးက 300-mg ကိုထိုးကော်ဖီ 2-3 ခွက်ထဲမှာကဖိန်းဓာတ်၏ပျမ်းမျှပမာဏကိုရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့ရှေးခယျြခဲ့သညျ။ ကျနော်တို့ကဖိန်းဓာတ် striatum အတွက် DA တိုးမြှင့်မည်မဟုတ်ပေမယ့်အစား D ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် striatal DA အချက်ပြမြှင့်တင်ရန်မယ်လို့တွေးဆ2R.
ဒေသခံသတင်းစာများအတွက်ကြော်ငြာများမှတဆင့်စုဆောင်း; ဒီလေ့လာမှုက 20 ကျန်းမာအထီးထိန်းချုပ်မှု (38 ±ပညာရေး 8 နှစ်ပေါင်းများစွာအသက် 26 ±3နှစ်, ခန္ဓာကိုယ်ဒြပ်ထုညွှန်းကိန်း 14 ± 2) ပါဝင်သည်။ ဖယ်စံမဆိုပစ္စည်းဥစ္စာကိုအသုံးပြုခြင်းရောဂါ (ဆေးလိပ်သောက်သူများဖယ်ထုတ်ထားခဲ့သည်) အပါအဝင် DSM IV နှုန်းအဖြစ်တစ်နေ့လျှင်နှစ်ယောက်ထက်ပိုဖိန်းဓာတ်အဖျော်ယမကာ, လက်ရှိသို့မဟုတ်အတိတ်စိတ်ရောဂါရောဂါစားသုံးမှုပါဝင်သည်; အတိတ်သို့မဟုတ်အာရုံကြောနှလုံးသွေးကြောသို့မဟုတ် endocrinological ရောဂါပစ္စုပ္ပန်သမိုင်း; 30 မိထက် သာ. ကြီးမြတ်ဝိညာဏ်၏ဆုံးရှုံးမှုနှင့်အတူဦးခေါင်းစိတ်ဒဏ်ရာများ၏သမိုင်း; နှင့်လက်ရှိဆေးဘက်ဆိုင်ရာနာမကျန်း။ သင်တန်းသားများကိုတဆယ်ခုနစ်သူတို့ကော်ဖီ (သို့မဟုတ်ဖိန်းအဖျော်ယမကာ) ကိုမသောက်ခဲ့ဘူးကြောင်းအစီရင်ခံ, တစျနေ့တစျခွက်ကိုအစီရင်ခံတင်ပြခြင်းနှင့်နှစ်ဦးကိုနှစ်ခွက်တစ်ရက်ကဖော်ပြခဲ့သည်။ Written အကြောင်းကြားခွင့်ပြုချက်အပေါငျးတို့သဘာသာရပ်များမှရရှိသောနှင့်လေ့လာမှုများသည် Stony Brook တက္ကသိုလ် Medical Center မှပြန်လည်သုံးသပ်နှင့်အဖွဲ့အစည်းဆိုင်ရာကိုပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းဘုတ်အဖွဲ့ကအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။
ကဖိန်းဓာတ်၏အမူအကျင့်သက်ရောက်မှုကိုလေ့လာရန်, ငါတို့ 1 မတိုင်မီမှာရရှိသောခဲ့ (10 ထံမှ 30 မှ rated) Analog စအကြေးကို အသုံးပြု. ပုဂ္ဂလဒိဋ္ '' ရွှင်လန်း '' ၏အမြင်, 'မောပန်းခြင်း', 'အိပ်' နဲ့ 'ခံစားချက်' 'အဘို့အ Self-အစီရင်ခံစာများအကဲဖြတ်ခြင်းနှင့် ယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ရလဒ်များအရအိပ်ယာသို့မဟုတ်ကဖိန်းဓာတ်အုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် 120 မိ။26 မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ၏ Self-အစီရင်ခံစာများအကဲဖြတ်ရန် Analog စအကြေးခွံများအသုံးပြုမှု reproducible ဖြစ်ရန်နှင့်မူးယစ်တုံ့ပြန်မှုကြိုတင်ခန့်မှန်းဖို့ပြသခဲ့ကြသည်။27 အဆိုပါဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့ကျနော်တို့ [ရဲ့အဆုံးမှာဖိန်းအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် 120 မိရရှိသောအစီအမံ (မသုံး11အထွတ်အထိပ်ဖိန်းဓာတ်ဆိုးကျိုးများ (60-120 မိ) အတွက်အချိန်အတွင်းဖြစ်သည့်ကို C] raclopride စကင်), ။28
နှလုံးခုန်နှုန်းနှင့်သွေးဖိအားရလဒ်များအရအိပ်ယာသို့မဟုတ်ကဖိန်းဓာတ်၏အုပ်ချုပ်မှုမီနှင့်အခါအားလျော်စွာအဲဒီနောက် 120 မိပို့စ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာသို့မဟုတ် post ကိုဖိန်းသည်အထိငါးမိနစ်ကြားကာလမှာသုံးကြိမ်မှတ်တမ်းတင်ခဲ့ပါသည်။ ရလဒ်များအရအိပ်ယာသို့မဟုတ်ကဖိန်းဓာတ်မပြုမီယူအစီအမံ (Pre-မူးယစ်ဆေးအစီအမံ) ပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်နှင့်ထိုခေါ်ဆောင်သွား 60-120 မိ post ကိုအုပ်ချုပ်ရေး Post-မူးယစ်ဆေးအစီအမံအဖြစ်ပျမ်းမျှခဲ့ကြသည်။ မူးယစ်ဆေးဝါး၏ဆိုးကျိုးများအတူတွဲထားသောအဖြစ်အကဲဖြတ်ခဲ့ကြသည် tအဆိုပါအကျူးနှင့် Post-မူးယစ်ဆေးအစီအမံများအကြား -test နှိုင်းယှဉ်။
သွေးပြန်ကြောသည်အသွေးဖိန်းအုပ်ချုပ်ရေးပြီးနောက် 30, 60 နှင့် 120 မိမတိုင်မီမှာရေးဆွဲခဲ့သည်။ ပလာစမာထဲမှာကဖိန်းဓာတ်မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အရည် Chromatography သုံးပြီး quantified ခဲ့သည်။29
PET scan က
ကျနော်တို့ [နဲ့ HR + tomography (တစ်ဝက်ကိုအများဆုံး, 4.5 ချပ်မှာ resolution ကို 4.5 × 4.5 × 63 မီလီမီတာအပြည့်အဝအကျယ်) ကိုအသုံးပြု11ကို C] raclopride 4-8 MCI (တိကျတဲ့လှုပ်ရှားမှု 0.5-1.5 Ci μM-1 ) bombardments ရဲ့အဆုံးမှာ။ ပုံရိပ်များအတွက်လုပ်ထုံးလုပ်နည်းများအဖြစ်ယခင်ကဖော်ပြထားခဲ့သည်။30 အတိုချုပ်, 20 ပြောင်းလဲနေသောထုတ်လွှတ် Scan ဖတ်ချက်ချင်း 54 မိ၏တစ်ဦးစုစုပေါင်းဆေးထိုးပြီးနောက်ရရှိသောခဲ့ကြသည်။ သင်တန်းသားများကို [အတူ scan ဖတ်ခဲ့သည်11ကို C] နှစ်ကြိမ်, တစ်ချိန်ကရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်တစ်ကြိမ်ကဖိန်းဓာတ်နှင့်အတူ raclopride; ယင်းရလဒ်များအရအိပ်ယာ Scan ဖတ်သည့်ကဖိန်းဓာတ်စကင်မတိုင်မီ2ဇအမှုကိုပြုခံခဲ့ရသည်။ ကဖိန်းဓာတ် (300 မီလီဂရမ်) နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (သကြားတက်ဘလက်) ကို [မတိုင်မီနှုတ် 60 မိအုပ်ချုပ်ခဲ့သည်11ကို C] raclopride ဆေးထိုး။ ကတက်ဘလက်အဖြစ်အုပ်ချုပ်ခွင့်အခါခံတွင်းကဖိန်းဓာတ်ကနေအမြင့်ဆုံးသို့အကျိုးသက်ရောက်မှုများ ~ 60 မိမှာဖြစ်ပေါ်အဖြစ်ကျနော်တို့ 60 မိရွေးကောက်ခဲ့သည်။28 ပလာစမာထဲမှာကဖိန်းဓာတ်၏ထက်ဝက်အသက်, ~ 3-5 ဇဖြစ်ပါသည်31 ဒါကြောင့်ဒီအချိန်အမှတ်ပေတိုင်းတာ (60-120 မိ post ကိုဖိန်း) စဉ်အတွင်းမြင့်မားတဲ့ပလာစမာကဖိန်းဓာတ်အဆင့်ကိုရဖို့သေချာ။
ပေ image ကိုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ
ကျနော်တို့ nondisplaceable စည်းနှောင်အလားအလာ (BP ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာNDတစ်ဦး pixel-by-pixel အခြေခံပေါ်မှာနှိုင်းယှဉ်စေရန်ကျွန်တော်တို့ကို enabled ထားတဲ့ Neuroimaging, လန်ဒန်အဘို့အ Wellcome Trust မှစင်တာ, ဗြိတိန်), စာရင်းအင်း parametric မြေပုံ (SPM8 သုံးပြီး) ပုံရိပ်များ။32 အထူးသကျနော်တို့တစ်ဦးချင်းစီ voxel များအတွက်ရည်ညွှန်းဒေသအဖြစ်အသုံးပြုရသော cerebellum အတွက်ကြောင့်ရန် striatum အတွက် radiotracer ရဲ့တစ်ရှူးအာရုံစူးစိုက်မှု၏အချိုးအစား၏ equilibrium တိုင်းတာခြင်းမှကိုက်ညီသောဖြန့်ဖြူးအသံအတိုးအကျယ်အချိုး, ခန့်မှန်းပါတယ်။33 ဤပုံများကိုထို့နောက် 12-parameter သည်ဆှဖှေဲ့အသွင်ပြောင်းခြင်းနှင့် 2-မီလီမီတာ isotropic voxels သုံးပြီး Montreal အာရုံကြော Institute ၏ stereotactic အာကာသမှ Spatial ပုံမှန်ရှိကြ၏။ ယခင်ကနှင့်အတူဝယ်ယူ 34 ကျန်းမာဘာသာရပ်များအနေဖြင့်ရုပ်ပုံများကို အသုံးပြု. တီထွင်ခဲ့သည့်တစ်ဦးကထုံးစံ Montreal အာရုံကြော Institute က template ကို [11ကို C] raclopride နှင့်အတူတူပင်ပေစကင်ဖတ်စစ်ဆေးဖို့ sequence ကို,34 အဆိုပါဖြန့်ဖြူးအသံအတိုးအကျယ်အချိုးပုံရိပ်တွေ၏ Spatial ပုံမှန်များအတွက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ အဆိုပါဖြန့်ဖြူးအသံအတိုးအကျယ်အချိုးပုံရိပ်တွေ၏ voxels ကို BP ကိုက်ညီတဲ့ND + 1 ။
လွတ်လပ်သောဒေသ-of အကျိုးစီးပွား (Roi) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာယခင်ကဖော်ပြထားသကဲ့သို့ caudate, putamen နှင့် ventral striatum (VS) တွင် preselected ROIs သုံးပြီးဖျော်ဖြေခဲ့သည်25 အဆိုပါ SPM တွေ့ရှိချက် corroborate ရန်။ အဆိုပါရွယ်အတိုင်းအတာသိသိသာသာဖိန်းဓာတ်ကြောင့်ထိခိုက်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်သွေးရည်ကြည်ထဲမှာကဖိန်းဓာတ်၏အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူဆက်စပ်အကဲဖြတ်ရန်သောအပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များနှင့်အတူဆက်စပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာများအတွက်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။
ဦးနှောက်မြေပုံ (BPND) Spatial ဘာသာရပ်များကိုဖြတ်ပြီးဦးနှောက်ခန္ဓာဗေဒ၏အမျိုးမျိုးပြောင်းလဲနှင့်အတူဆက်စပ်ဆိုးကျိုးများ minimize တစ်ခု 8-မီလီမီတာ isotropic Gaussian kernel ကို အသုံးပြု. SPM8 အတွက်ပန်းခင်းလမ်းခဲ့ကြသည်။ တစ်ဦးက striatal မျက်နှာဖုံး (dorsal striatum နှင့် VS) ကို MRIcro software ကို (နှင့်အတူပေးအပ်ဒစ်ဂျစ်တယ်ခန္ဓာဗေဒဦးနှောက် atlases သုံးပြီးဖန်တီးခဲ့www.cabiatl.com/mricro/) ။ အထူးသ, (caudate, putamen နှင့် VS) striatum မှသက်ဆိုင်ရာပု voxels Automator အ Anatomical တံဆိပ်ကပ်ခြင်း Atlas သုံးပြီး Montreal အာရုံကြောဌာန Institute stereotactic အာကာသအတွင်းသတ်မှတ်ခဲ့ကြသည်။35 ကှဲလှဲတစ်ခုမှာ-လမ်း (အတွင်း-ဘာသာရပ်များ) ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာကို BP အပေါ်မူးယစ်ဆေးဆိုးကျိုးများ (ဖိန်း vs ရလဒ်များအရအိပ်ယာ) အကဲဖြတ်ရန်အသုံးပြုခဲ့သည်ND SPM8 အတူ။ စာရင်းအင်းအရေးပါမှုဟာတင်းကြပ်တံခါးခုံကသတ်မှတ်ပေးခဲ့သည် PFWE<0.05, မိသားစုပညာရှိအမှားပြင်ဆင်ချက်နှင့်အတူကျပန်းလယ်ကွင်းသီအိုရီကိုအသုံးပြုပြီး (striatal မျက်နှာဖုံးအတွင်း) voxel အဆင့်မှာမျိုးစုံနှိုင်းယှဉ်များအတွက်တညျ့။ ရလဒ်များအရ placebo နှင့် caffeine အကြားသိသိသာသာကွဲပြားသည့်ဒေသများ၏ MRI တည်နေရာနှင့် ပတ်သက်၍ အမြင်အာရုံအတွက်၊ P
လွတ်လပ်သောရွယ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာဘို့, စာရင်းအင်းအရေးပါမှုမှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည် P<0.05, က SPM တွေ့ရှိချက်အတည်ပြုလျှင်။
အဆိုပါအမူအကျင့်များနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအစီအမံများအတွက်ကျနော်တို့ကှဲလှဲ၏ထပ်ခါတလဲလဲခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာသုံးပြီးရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်ကဖိန်းဓာတ်ရမှတ်များအကြားတစ်ဦးချင်းစီအချိန်အချက်နှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ။ ဆက်စပ်မှုဆန်းစစ်ခြင်းများပြုလုပ်ထားခြင်းဖိန်းဓာတ်ကို BP ပြောင်းလဲသွားတယ်ရှိရာဒေသများအကြားဆက်ဆံရေးအကဲဖြတ်ရန်ပြုခဲ့ကြND နှင့်သိသိသာသာဖိန်းဓာတ်ကြောင့်ထိခိုက်သောအပြုအမူဆောင်ရွက်ချက်များ။ အဓိပ်ပာယျမှာသတ်မှတ်ထားခဲ့သည် P
သက်ဆိုင်ရာအချိန်အတိုင်းအတာအဘို့ဖိန်းဓာတ်နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအကြားနှိုင်းယှဉ် '' 30 မှာနှစ်ဦးစလုံး '' ရွှင်လန်း '' ၏သိသိသာသာမြင့်မားတဲ့ Self-အစီရင်ခံစာများပြသ (P= 0.05) နှင့် 120 မှာ '(P'' 0.01 မှာ '' အိပ် '၌ = 120) နှင့်အနိမ့်ရမှတ် (Pရလဒ်များအရအိပ်ယာထက် = 0.04) ။ ခံစားချက်နှင့်မောပန်းခြင်းအပေါ်ရမှတ်များအဘို့ဖိန်းဓာတ်နှင့်ရလဒ်များအရအိပ်ယာအကြားကွာခြားချက်များသာ (လမ်းကြောင်းသစ်သက်ရောက်မှုရောက်ရှိP> 0.06 <0.09; ပုံ 1).
ရလဒ်များအရအိပ်ယာနှင့်ကဖိန်းဓာတ်မီနှင့် 30 နှင့် 120 မိ၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများဟာသူတို့ရဲ့အုပ်ချုပ်မှုအပြီး။ အဓိပ်ပာယျရလဒ်များအရအိပ်ယာ (မီးခိုးရောင်သင်္ကေတ) နှင့်ကဖိန်းဓာတ် (အနက်ရောင်သင်္ကေတ) နှင့်တန်ဖိုးများအကြားနှိုင်းယှဉ်နည်းလမ်းများနှင့်စံအမှားအယွင်းများကိုက်ညီတဲ့ကိုက်ညီ။
ပျမ်းမျှနှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာအစီအမံများသိသိသာသာဖိန်းဓာတ် (post ကို vs ကြိုတင်) ကထိခိုက်မခံခဲ့ရပါ။ အထူးသနှလုံးခုန်နှုန်းအဘို့, post ကိုဖိန်းဓာတ် (70 ± 10 vs 64 ± 9) vs ပို့စ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာ (66 ±9vs 65 ± 11) သို့မဟုတ်ကြိုတင် vs pre; နှလုံးကျုံ့ဖိအားအဘို့, post ကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာ (124 ±6vs 122 ± 7) သို့မဟုတ် post ကိုဖိန်းဓာတ် (128 ± 11 vs 129 ± 9) vs ကြိုတင် vs pre; သို့မဟုတ် diastolic ဖိအားအဘို့, post ကိုရလဒ်များအရအိပ်ယာ (67 ± 10 vs 65 ± 9) vs pre သို့မဟုတ် post ကိုဖိန်းအစီအမံ (71 ± 12 vs 69 ± 11) vs pre; အရာတစုံတခုကိုမျှအချင်းချင်းတယောက်ကိုတယောက်အနေဖြင့်သိသိသာသာကွာခြား။
ကဖိန်းဓာတ်အုပ်ချုပ်ရေးမတိုင်မီယူပလာစမာနမူနာအပေါ်ဖိန်းဓာတ်၏အဘယ်သူမျှမရှာဖွေ ထောက်လှမ်း. အဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့သည်။ ပလာစမာထဲမှာကဖိန်းဓာတ်အာရုံစူးစိုက်မှု၏ဆောင်ရွက်ချက်များ 4.7 ±2μg ml ခဲ့ကြသည်-1 30 မိ, 5.2 ± 1 μg ml မှာ-1 60 မိနှင့် 4.8 ± 0.6 μg ml မှာ-1 120 မိမှာပါ။ ဒါက [ကျနော်တို့၏အချိန်မှာပလာစမာထဲမှာကဖိန်းဓာတ်၏အထွတ်အထိပ်အဆင့်ဆင့်ရှိခဲ့ကြောင်း corroborated11ကို C] raclopride ဆေးထိုး (60 မိ post ကိုဖိန်း) နှင့်မြင့်မားသည့်အမူအကျင့်အစီအမံ (30 နှင့် 120 မိ post ကိုဖိန်းဓာတ်) ၏ထိုအချိန်က။
: D အပေါ်ဖိန်းဓာတ်၏ဆိုးကျိုးများ2/D3R ကိုရရှိနိုင်
SPM ဖိန်း D ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းထင်ရှား2/D3ကို BP အတွက်တိုးအဖြစ်လေ့လာတွေ့ရှိ R ကိုရရှိနိုင်မှု (ND) () dorsal putamen နှင့် VS အပါအဝင်ညာနဲ့ကျန်ရစ် striatum အတွက်ပျမ်းမျှစာရင်းအင်းမြေပုံအဖြစ်သိသာပြွတ် (၏ဗဟိုကနေဖြည်တစ်ဦးချင်းစီတန်ဖိုးများအားဖြင့်နှစ်ဦးစလုံးပြထားတဲ့အတိုင်းပုံ 2, စားပွဲတင် 1).
(a: D အတွက်သိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုဖေါ်ပြခြင်းစာရင်းအင်း parametric မြေပုံ (SPM) နှင့်ရရှိသော) ဦးနှောက်မြေပုံ2/D3nondisplaceable စည်းနှောင်အလားအလာ (BP အဖြစ် quantified ခဲ့သော R ကိုရရှိနိုင်မှု,NDဆန့်ကျင်ဘက်ကဖိန်း> plaċeboအဘို့အ placebo နှင့်ကဖိန်းအကြား) ။ အရေးပါမှုအတွက်တံခါးခုံကိုက်ညီ Pu<0.01, ပြွတ်> 100 voxels ။ (b) ကို BP များအတွက်တစ်ဦးချင်းတန်ဖိုးတွေကိုND ရလဒ်များအရအိပ်ယာပြီးနောက်များနှင့်ကဖိန်းဓာတ်ပြီးနောက် dorsal putamen နှင့် ventral striatum အတွက်ထုတ်ယူအတိုင်းအတာထဲကနေ။
ဇယား 1 - BP ပြောင်းလဲမှုများအတွက်စာရင်းအင်းဆိုင်ရာအရေးပါမှုND ရလဒ်များအရအိပ်ယာထက်ကဖိန်းဓာတ် သာ. ကြီးမြတ်သည့်ဆနျ့ကငျြဘအဘို့။
အဆိုပါလွတ်လပ်သောရွယ်ကို BP အတွက်ရလဒ်များအရအိပ်ယာသွေးဆောင်သေးငယ်ပေမယ့်သိသိသာသာတိုးနဲ့နှိုင်းယှဉ်တဲ့အခါကဖိန်းဓာတ် corroborated, ပိုင်းခြားသုံးသပ်ပြီးND, putamen (ရလဒ်များအရအိပ်ယာများတွင်: 2.84 ဖိန်း vs 0.37 ±: 2.97 ± 0.35; P= 0.05) နှင့် VS (ရလဒ်များအရအိပ်ယာများတွင်: 2.69 ဖိန်း vs 0.31 ±: 2.84 ± 0.39, P= 0.05) သော်လည်းမ caudate ၌တည်၏။
: D ထဲမှာကဖိန်းဓာတ်-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများအကြားဆက်စပ်မှု2/D3R ကိုရရှိနိုင်မှုနှင့်အပြုအမူများနှင့်ပလာစမာအဆင့်ဆင့်
အဆိုပါ striatal ရွယ်နှင့်အတူဆက်စပ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာနှင့်အပြုအမူဆိုင်ရာအစီအမံ VS နှင့် alert (အကြားသိသိသာသာအပြုသဘောဆက်စပ်မှုပြသr= 0.56, P: D အတွက် = 0.01) ထိုသို့သောကြောင်းတိုး2/D3ကဖိန်းဓာတ်နှင့်အတူ R ကိုရရှိနိုင်မှုရွှင်လန်းအတွက်တိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။
: D ထဲမှာကဖိန်းဓာတ်-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများအကြားဆက်စပ်မှုခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာ2/D3ပလာစမာထဲမှာ striatum နှင့်ကဖိန်းဓာတ်၏အဆင့်ဆင့်အတွက် R ကိုရရှိနိုင်မှုသိသာဘူး။
ဤတွင်ကျနော်တို့ကဖိန်းဓာတ် D ကိုတိုးပွါးကြောင်းပြသ2/D3striatum အတွက် R ကိုရရှိနိုင်မှု (BP အတွက်တိုးအဖြစ်သက်သေND dorsal putamen နှင့် VS) နေ့စဉ်ဖိန်းဓာတ်စားသုံးမှု၏အနိမ့်အဆင့်ဆင့်နှင့်အတူကျန်းမာထိန်းချုပ်မှု၏အုပ်စုတစုပါ။ ဤရွေ့ကားတွေ့ရှိချက်တစ်ခုကြိုတင်ပေကနေတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီ [11ထို့အပြင်: D ထဲမှာတိုးအစီရင်ခံကြောင်းဘာသာရပ်များ (ရှစ်လေ့ကော်ဖီသောက်) ၏အုပ်စုငယ်၌ပြစ်မှားမိကို C] raclopride လေ့လာမှု2/D3ကဖိန်းဓာတ် (200 မီလီဂရမ်) နဲ့ striatum အတွက် R ကိုရရှိနိုင်မှု။24 အဲဒီနှစျခုလေ့လာမှုများအနေဖြင့်အဆိုပါတွေ့ရှိချက်အရှင်ပုံမှန်အားဖြင့်လူသားတို့စားသုံးဆေးများမှာကဖိန်းဓာတ် D ကိုတိုးမြှင့်ခြင်းဖြင့် DA အချက်ပြမြှင့်တင်ရန်စခွေငျးငှါအကြံပြု2/D3R ကိုအဆင့်ဆင့်သို့မဟုတ်၎င်းတို့၏ဆှဖှေဲ့ထက် striatum အတွက်တိုးပွားလာ DA လွှတ်ပေးရေးသည်။
ဤတွင်ကျနော်တို့ကို BP အတွက်တိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုအနက်ကိုဘော်ပြND (BP အတွက်ND သူတို့က D ထဲမှာတိုးရောင်ပြန်ဟပ်ကြောင်းအကြံပြုဖို့ကဖိန်းဓာတ်နှင့်အတူရရှိနိုင်မှု)2/D3R ကိုအဆင့်ဆင့်ထက်ပုံမှန်အားကို BP အတွက်တိုးပွါးသောလမ်းဖြစ်သည့် endogenous DA အတွက်လျှောက်လျော့နည်းထင်ဟပ်ND (DA ထံမှလျှော့ချယှဉ်ပြိုင် D ကိုမှခညျြနှောငျဘတ်နေကြသည်2/D3R ကို) ။ ဒီအနက်များအတွက်အကြောင်းပြချက်လိုက်နာပါ။ ပထမဦးစွာပြုလုပ်သတိပေးနခွေငျးမူးယစ်ဆေးဝါးများ (စိတ်ကြွဆေး, methylphenidate နှင့် modafinil) ကို striatum အတွက် DA လွှတ်ပေးရန်တိုးမြှင့်ကြောင်းအသိအမှတ်ပြုသည်။3, 25, 36 ဒုတိယအချက်မှာလက်တွေ့လေ့လာမှုများလှုံ့ဆော်မူးယစ်ဆေးဝါးများအားဖြင့်သွေးဆောင် striatum အတွက် DA တိုးရွှင်လန်းအတွက်တိုးနှင့်ဆက်စပ်လျက်ရှိသောပြသခဲ့ကြသည်။5 နောက်ဆုံးအနေနဲ့ preclinical လေ့လာမှုများစိတ်ကြွဆေးနှင့် modafinil အားဖြင့်သွေးဆောင် striatal DA အတွက်တိုး၎င်းတို့၏ပါတီအား-မြှင့်တင်လုပ်ဆောင်ချက်များအတွက်လိုအပ်သောကြောင်းပြသခဲ့ကြသည်။6 ကဖိန်းဓာတ်ဟာ striatum အတွက် DA လျှော့ချခဲ့မယ်ဆိုရင်ထို့ကြောင့်, ဤအစားဖိန်းအုပ်ချုပ်မှုအပြီးလေ့လာတွေ့ရှိရွှင်လန်းအတွက်တိုး၏ပင်ပန်းနွမ်းနယ်ခြင်းနှင့်အိပ်တစ်ခုတိုးလာမှုရှိသည်ဟုလိမ့်မယ်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အနက် striatal: D အတွက်တိုးမြှင့်ကြောင်း2/D3ကဖိန်းဓာတ်နှင့်အတူ VS အတွက် R ကိုရရှိနိုင်မှု: D တစ်ခုတိုးရောင်ပြန်ဟပ်2/D3R ကိုအဆင့်ဆင့် VS အတွက် D2 / D3R ၏ downregulation အိပ်ရေးပျက်လျှော့ရွှင်လန်းနှင့်ဆက်စပ်နေသည်ပြီးနောက်ကြောင့်လည်းကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီသည်။5
Striato-pallidal အာရုံခံ: D ပြောင်းလဲနေတဲ့နေဖြင့်၎င်းတို့၏စိတ်လှုပ်ရှား adjust2ယင်းအမြှေးပါးအတွင်း R ကိုအဆင့်ဆင့်။37 ထို့ကြောင့်: D2R ကို DA ဆွနှင့်အတူ downregulate38 နှင့်လျှော့ချ DA အချက်ပြနှင့်အတူ upregulate ။39, 40 : D ၏ DA ဆွ2R ကိုသူတို့ရဲ့ International ကိုအစပျိုးလိုက်ခြင်း,38 အရာထို့နောက်ပြန်လည်အသုံးပြုသို့မဟုတ်ပျက်ဆီးဆုံးရှုံးစေနိုင်သည်။38, 41 D2R ၏ International တစ်နေဖြင့်စည်းမျဉ်းသတ်မှတ်တာဖြစ်ပါတယ်2AR,42 agonists ဟာတစ်ဦးမှβ-arrestin2၏ binding မှတဆင့်၎င်း၏ International လွယ်ကူချောမွေ့2ARD2R ကိုအဲဒီ receptor heteromers43 တစ်ဦးကသော်လည်း2AR ကိုရန် D နဲ့နှောင့်အယှက်2striatal အာရုံခံအတွက် R ကို International ။44 ထို့ကြောင့်ကဖိန်းဓာတ်တစ်ဦးလုပ်သူများတစ်ဦးနှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်မယ်2A: D ၏ R-မှီခို International2R ကိုယင်း၏ psychostimulant သက်ရောက်မှုအထောက်အကူပြုနိုင်သည့် endogenous adenosine, ကကမကထပြုခဲ့။14, 19, 45, 46 အမှန်စင်စစ်သူတို့နှင့်အတူတလျှောက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်ဟာအရင်ကဖိန်း D ကိုတိုးမြှင့်ကြောင်းဖေါ်ပြခြင်းအစီရင်ခံတင်ပြ2striatum အတွက် R ကိုရရှိနိုင်မှု,24 ဒီအနက်ကိုထောက်ခံပါတယ်။ ကဖိန်းဓာတ်တစ်ဦးက၎င်း၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းအသုံးပြုပုံတစ်စိတ်တစ်ဒေသအတွက်, DA အချက်ပြ modulates အဖြစ်2AR,47 ကဖိန်းဓာတ်-သွေးဆောင်: D2striatum ကို R တိုးမြှင့်ခြင်းသည်ကဖိန်းဓာတ်၏ A ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်မှုနှင့်ကိုက်ညီလိမ့်မည်2A-mediated: D2R ကို International ။ အမှန်စင်စစ်တစ်ဦးက2A အဲဒီ receptor နောက်ကောက်ကြွက်တိုးမြှင့် D ကိုပြသ2striatum အတွက် R ကိုအဆင့်ဆင့်;48 ကျနော်တို့သေချာပေါက်စူးရှသောကဖိန်းဓာတ်ထိတွေ့မှုကနေအပေါ်သက်ရောက်မှုများနှင့်အတူတစ်နောက်ကောက်၏နာတာရှည်ပြည်နယ်တူညီမနိုင်သော်လည်း။
သို့သော်မသက်ဆိုင် striatal: D ထဲမှာတိုးတာဝန်ရှိသည့်ယန္တရား၏2/D3R ကိုရရှိနိုင်မှု, ကျွန်တော်တို့ရဲ့ရလဒ်တွေကိုလူသားများ, ပုံမှန်အားဖြင့်စားသုံးသည့်ဆေးများမှာကဖိန်းဓာတ်၌, striatum အတွက် DA တိုးမြှင့်တော်မမူကြောင်းဖော်ပြသည်။ ဒီအကြောင်းဖိန်းဖေါ်ပြခြင်းကြွက်များတွင် microdialysis လေ့လာမှုများကနေတွေ့ရှိချက်တွေနဲ့ကိုက်ညီဖြစ်ပါတယ် (0.25-5 ကီလိုဂရမ် MG-1 သွေးကြောသွင်းသို့မဟုတ် 1.5 30 မီလီဂရမ်ကီလိုဂရမ်-1 intraperitoneally) ကနျူကလိယ accumbens အတွက် DA မတိုးခဲ့ဘူး,22, 23 လေ့လာမှုတစ်ခုကြီးမားတဲ့ (10 မီလီဂရမ်ကီလိုဂရမ်နှင့်အတူတိုးအစီရင်ခံတင်ပြသော်လည်း-1 intraperitoneally) ပေမယ့်မနိမ့်ဖိန်းထိုး (3 မီလီဂရမ်ကီလိုဂရမ်-1 intraperitoneally) ။21 ထို့ကြောင့်လက်ရှိနှင့်ကြိုတင်တွေ့ရှိချက်များ၏အခြေခံပေါ်မှာ24 နှင့် preclinical ရလဒ်များကို, လူ့စားသုံးမှုမှသက်ဆိုင်ရာဖြစ်ကြောင်းဆေးများမှာကဖိန်းဓာတ်ဟာနျူကလိယ accumbens အတွက် DA တိုးမြှင့်ဖို့ပေါ်လာပါဘူး။ DA တိုးမြှင့်ဖို့အလွဲသုံးစားမှုမူးယစ်ဆေးဝါးများများ၏စွမ်းရည်နှင့်အမျှ၎င်းတို့၏အကျိုးသက်ရောက်မှုနှင့်စွဲ phenotype နှင့်အတူဆက်စပ် neuroadaptations များအတွက်လိုအပ်သောဖြစ်ပါသည်,49 ကဖိန်းဓာတ်ဟာ compulsive အုပ်ချုပ်ရေးနှင့်စွဲရိုကျလက်ခဏာဖွစျတဲ့ကြောင့်ထိန်းချုပ်မှုများဆုံးရှုံးမှုထုတ်လုပ်ရန်ပါဘူးဘာကြောင့်ဒီကိုရှင်းပြနိုင်ဘူး။50
: D ထဲမှာကဖိန်းဓာတ်-သွေးဆောင်တိုး2/D3VS အတွက် R ကိုရွှင်လန်းအတွက်တိုးနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။ ရွှင်လန်းခြင်းနှင့် D ကိုအကြားဒါဟာအသင်းအဖွဲ့2/D3R ကိုကျနော်တို့: D အတွက်လျှောက်လျော့နည်းကြောင်းပြသရသောအိပ်ရေးပျက်နှင့်အတူဒါပေမယ့်ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်အတွက်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ယခင်တွေ့ရှိချက်များ, replicates2/D3အိပ်ရေးပျက်နှင့်အတူ VS အတွက် R ကိုရရှိနိုင်မှုရွှင်လန်းအတွက်လျှော့ချနှင့်ဆက်စပ်ခဲ့သည်။5 ကြိုတင်ပေလေ့လာမှု, striatal: D ထဲမှာကဖိန်းဓာတ်-သွေးဆောင်တိုးခုနှစ်တွင်2/D3R ကိုရရှိနိုင်မှုလျှော့မောပန်းခြင်းနဲ့ဆက်စပ်ခဲ့ကြသည်။24 ထို့ကြောင့်ဒီဃတဆင့်ပြတိုးမြှင့်ကြောင်းသက်သေအထောက်အထားများကိုထောက်ပံ့ပေး2/D3လျှော့ချအချက်ပြရွှင်လန်းလျော့သို့မဟုတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်တိုးမြှင့်စေခြင်းငှါ, သော်လည်း striatal ဒေသများတွင် R ကို, ရွှင်လန်းမြှင့်တင်ရန်သို့မဟုတ်ပင်ပန်းနွမ်းနယ်လျော့ပေလိမ့်မည်။
အစဉ်အလာ, D ကိုအတွက်တိုးပွါး2/D3[အတူ R ကိုရရှိနိုင်11ကို C] raclopride, ဒီမှာလေ့လာတွေ့ရှိအဖြစ်, DA လွှတ်ပေးရန်အတွက်လျှောက်လျော့နည်းရောင်ပြန်ဟပ်ဘတ်ပါပြီ။ အဲဒီအစားကျွန်တော်တို့ရဲ့မော်ဒယ်: D အတွက်တိုးမြှင့်အဖြစ်ကသူတို့ကိုအနက်ကိုဘော်ပြခြင်းငှါငါတို့ကိုပို့ဆောင်2/D3R ကိုအဆင့်ဆင့်နှင့် / သို့မဟုတ်ဆှဖှေဲ့အတွက်တိုး။ [တစ်ခုထက် ပို. အချက်၏စည်းနှောင်ထိခိုက်နိုင်ရှက်ကြောက်သို့သော်ကျွန်ုပ်တို့၏မော်ဒယ်အလားအလာထွက်မအုပ်စိုးလို့မရဘူး11ကို C] raclopride ။ ဤအမှု၌ပိုမိုရွေးချယ်ဒြပ်ပေါင်းများကိုအသုံးပြု preclinical စမ်းသပ်ချက်အပေါ်ဖိန်းရဲ့သက်ရောက်မှုရှိမရှိစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်ဖျော်ဖြေရပါမည် [11ကို C] ဟူသောအသုံးအနှုနျးဒါမှမဟုတ် D ကို၏ဆှဖှေဲ့ပြောင်းလဲမှုများရောင်ပြန်ဟပ် binding raclopride2/D3R ကိုဤသက်ရောက်မှုတစ်ဦးမှာကဖိန်းဓာတ်ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်ခြင်းကိုထင်ဟပ်ခြင်းရှိမရှိ2AR. ဒါ့အပြင် [ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့11ကို C] raclopride ခညျြနှောငျနှစ်ဦးစလုံး D ကိုမှ2R ကိုနဲ့ D3R,51 ကျနော်တို့ striatal ကို BP အတွက်ရှိမရှိဖိန်း-သွေးဆောင်တိုးခွဲခြားလို့မရပါဘူးND : D အတွက်သာတိုးမြှင့်ကိုရောင်ပြန်ဟပ်2ထို့အပြင် R ကိုသို့မဟုတ်: D အတွက်3: D ၏ရှိရာဆွေမျိုးသိပ်သည်းဆ putamen အတွက်သို့သော် R. ,3R ကို: D ၏ထက်အများကြီးနိမ့်ဖြစ်ပါတယ်2R,52 ကဖိန်းဓာတ်၏သက်ရောက်မှု D ကိုရောင်ပြန်ဟပ်ဖို့များပါတယ်2R. ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုမှာနောက်ထပ်အလားအလာရှိသောရှက်ကြောက်ဖိန်းဓာတ်သိသိသာသာနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုလျော့ကျစေပါတယ်ကြောင့်ဖြစ်ပါသည်,53 ယင်းကို BP နှင့်အတူဝင်ရောက်စွက်ဖက်နိုင်သည့်ND ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုသက်ရောက်မှုအဖြစ်အစီအမံ cerebellum နှင့် striatum အကြားကွဲပြားခြားနား။54 သို့သော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဖိန်း cerebellum အတွက်ထက် သာ. ကြီးမြတ်အတိုင်းအတာအထိ striatum အတွက်ဦးနှောက်သွေးစီးဆင်းမှုလျော့ကျ,54 ဒီ striatal ကို BP အတွက်လျှောက်လျော့နည်းဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြလိမ့်မယ်NDကျနော်တို့ဆန့်ကျင်ဘက်ပြသသော်လည်း, ကြောင်း striatal ကို BP အတွက်တိုးမြှင့်ဖြစ်ပါတယ်ND ကဖိန်းဓာတ်နှင့်အတူကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်နှောက်သွေးစီးဆင်းမှုအတွက်ဖိန်း-သွေးဆောင်အပြောင်းအလဲများကြောင့်မဟုတ်ကြောင်းညွှန်ပြ။ အဆိုပါ raclopride ပေနည်းလမ်း DA အာရုံခံအတွက် presynaptic နှင့် postsynaptic D2 / D3R အကြားဖိန်း D2R ဖော်ပြအလတ်စား spiny အာရုံခံအတွက်ထုတ်ဖော်ပြောဆိုထားတဲ့ A2A receptors မှာတစ်ဦးရန်ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အချက်ကိုခွဲခြားသော်လည်းမမနိုင်သော်လည်းသက်ရောက်မှု postsynaptic ဖြစ်ကြောင်းယူဆပါတယ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုဦးဆောင်လမ်းပြ။ ရလဒ်များအရအိပ်ယာအမြဲဖိန်းမတိုင်မီ2ဇပေးထားခဲ့ပါတယ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့လေ့လာမှုတွေအတွက်နောက်ထပ်ရှက်ကြောက်အမိန့်သက်ရောက်မှုဖြစ်ပါတယ်။ သို့သော် raclopride (ငါတို့အပါအဝင်) binding အဘို့စမ်းသပ်-retest reproducibility အကဲဖြတ်ကြပြီ, လေ့လာမှုများ55, 56 အဆိုပါထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံထိုနေ့ရက်တွင်ဖျော်ဖြေခဲ့ကြလျှင်ပင်တိုင်းတာမှုများအကြားမျှသိသာထင်ရှားသောကွဲပြားခြားနားမှုအစီရင်ခံတင်ပြကြပါပြီ57 လက်ရှိလေ့လာမှုနှုန်းအတိုင်း, အမိန့်သက်ရောက်မှုကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အဘို့အကောင့်မှမဖြစ်နိုင်ကြောင်းညွှန်ပြ။ ကျနော်တို့သင်တန်းသားများကိုကျနော်တို့လေ့လာမှုရဲ့အဆုံးမှာသူတို့ကို query မပြုခဲ့အဖြစ်သူတို့ဖိန်းသို့မဟုတ်ရလဒ်များအရအိပ်ယာလက်ခံရရှိလျှင်ဆုံးဖြတ်ရန်နိုငျခဲ့ကွပါလျှင်အကဲဖြတ်ရန်နိုင်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ကျနော်တို့ကဖိန်းဓာတ်တိုးထားတဲ့, epinephrine နှင့် norepinephrine အဘို့အသွေးနမူနာစုဆောင်းခဲ့ပါဘူး။58 ထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ကဖိန်းဓာတ်၏အမူအကျင့်အပေါ်သက်ရောက်မှုများပေါ်တွင်ကိုယ်ပိုင်အုပ်ချုပ်ခွင့်ရစနစ်ဖိန်းရဲ့သက်ရောက်မှုများ၏အလှူငွေထွက်အုပျစိုးနိုငျပါဘူး။ မည်သို့ပင်ဆိုစေ, VS အတွက် D2R ရရှိနိုင်မှုအတွက်တိုးမြှင့်ခြင်းနှင့်ရွှင်လန်းအကြားသိသာထင်ရှားသောအသင်းအဖွဲ့ D2R အပေါ်ဖိန်းရဲ့သက်ရောက်မှုက၎င်း၏သတိပေးနခွေငျးသက်ရောက်မှုအထောက်အကူပြုအချက်ပြကြောင်းဖော်ပြသည်။
ကျနော်တို့ D ကိုတစ်ဦးသိသိသာသာတိုးပြသ2/D3လူသားတို့ကိုလောင်ဆေးများမှာကဖိန်းဓာတ် striatum အတွက် DA တိုးမြှင့်မထားဘူးကွောငျးဖျောပွရာဖိန်းအုပ်ချုပ်ရေးနှင့်အတူ striatum အတွက် R ကိုရရှိနိုင်မှု။ အဲဒီအစားကျွန်တော်တို့ဟာသွယ်ဝိုက်ဖြစ်ကြပြီး D: ထဲမှာတစ်ခုတိုးကကမကထပြုခဲ့လူ့ဦးနှောက်ထဲမှာကဖိန်းဓာတ်ရဲ့ DA-တိုးမြှင့်သက်ရောက်မှုညွှန်ပြပေးဖို့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တွေ့ရှိချက်အနက်ကိုဘော်ပြ2/D3R ကိုအဆင့်ဆင့်နှင့် / သို့မဟုတ်: D ပြောင်းလဲမှုများ2/D3R ကိုဆှဖှေဲ့။
Mitchell က DC၊ Knight, CA, Hockenberry J, Teplansky R, Hartman TJ ။ US Food Chem Toxicol ၂၀၁၄ တွင်အဖျော်ယမကာကဖိန်းဓာတ်ပါဝင်မှု၊ 2014: 63-136 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Cardenas L, Houle S, Kapur S, Busto UE ။ PET မှတိုင်းတာသည့်အတိုင်းခံတွင်း D-amphetamine [11C] raclopride ကိုအချိန်ကြာမြင့်စွာရွှေ့ပြောင်းခြင်းကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ Synapse 2004; ၅၁: ၂၇-၃၁ ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Volkow ND, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Alexoff: D, Zhu W က, Telang က F et al။ ယောက်ျား၏ ဦး နှောက်အတွင်းရှိ dopamine နှင့် dopamine transporters များအပေါ် modafinil ၏အကျိုးသက်ရောက်မှုများ - လက်တွေ့သက်ရောက်မှုများ။ ဂျမေရာ ၂၀၀၉; 2009: 301-1148 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Volkow ND, ဝမ်, G, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Gerasimov က M, Maynard L ကို et al။ ပါးစပ် methylphenidate ၏ကုထုံးဆေးများသိသိသာသာလူ့ ဦး နှောက်ထဲမှာ extracellular dopamine တိုးမြှင့်။ J ကို Neurosci 2001; 21: RC121 ။ | PubMed | CAS |
Volkow ND, Tomasi: D, ဝမ် GJ, Telang က F, မုဆိုး JS, Logan J ကို et al။ လူ့ ဦး နှောက်ရှိ ventral striatum တွင်အိပ်စက်ခြင်းသည် dopamine D2R ကိုပုံမှန်ဖြစ်စေသည်။ J ကို Neurosci 2012; 32: 6711-6717 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Wisor JP, Nishino S, Sora I, Uhl GH, Mignot E, Edgar DM ။ လှုံ့ဆော် - သွေးဆောင်နိုးအတွက် Dopaminergic အခန်းကဏ္။ ။ J ကို Neurosci 2001; 21: 1787-1794 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Abi-Dargham A, Kegeles LS, Martinez D, Innis RB, Laruelle M. Dopamine စိတ်ကြွဆေးများလှုံ့ဆော်မှုမရှိသောကျန်းမာသန်စွမ်းသောစေတနာ့ဝန်ထမ်းများ၌အပြုသဘောဆောင်သောအားဖြည့်သက်ရောက်မှုများကိုစေ့စပ်ဖြန်ဖြေခြင်း။ Eur Neuropsychopharmacol 2003; 13: 459-468 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
ငုယင် TL, Tian YH, You IJ, Lee SY, Jang CG ။ ကြွက်များရှိ dopaminergic system မှတစ်ဆင့် Modafinil- သွေးဆောင်မှုအခြေအနေကို ဦး စားပေးသည်။ Synapse 2011; 65: 733-741 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Gatley SJ, Wong ကကို C et al။ လူသားများတွင် psychostimulants ၏အားဖြည့်သက်ရောက်မှု ဦး နှောက် dopamine နှင့် D (2) receptors ၏ထေိုနှင့်အတူဆက်စပ်နေကြသည်။ J ကို Pharmacol Exp Ther 1999; 291: 409-415 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Wuo-ဆေးလ်ဗား R ကို, Fukushiro DF, Borcoi AR, ဖာနန်ဒက်စ HA, Procopio-Souza R ကို, Hollais AW et al။ ကိုကင်းနှင့်အတူ modafinil နှင့် Cross- sensitization ၏စွဲလမ်းအလားအလာ: တစ် ဦး Pre- လက်တွေ့လေ့လာမှု။ စွဲ Biol 2011; 16: 565-579 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Banerjee: D, Vitiello MV, Grunstein RR အလွန်အကျွံနေ့ခင်းဘက်အိပ်ဘို့ဆေးဝါးကုထုံး။ Med Rev 2004 အိပ်ပျော်; 8: 339-354 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Chen က JF, Xu K ကို Petzer JP, Staal R ကို, Xu YH, Beilstein M က et al။ ပါကင်ဆန်ရောဂါပုံစံတစ်ခုတွင်ကဖိန်းဓာတ်နှင့် Neuroprotection နှင့် A (2 A) adenosine receptor inactivation တို့ဖြစ်သည်။ J ကို Neurosci 2001; 21: RC143 ။ | PubMed | CAS |
El Yacoubi M, Ledent C, Menard JF, Parmentier M, Costentin J, Vaugeois JM ။ ကြွက်များတွင် locomotor အပြုအမူအပေါ်ကဖိန်း၏လှုံ့ဆော်သက်ရောက်မှုက adenosine A (2A) receptors ၎င်း၏ပိတ်ဆို့မှတဆင့်ကမကထပြုခဲ့ကြသည်။ Br J ကို Pharmacol 2000; 129: 1465-1473 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Huang က ZL, Qu WM, Eguchi N ကို, ချန် JF, Schwarzschild MA, Fredholm BB et al။ Adenosine A2A သည် A1A မဟုတ်ပါက receptor များသည်ကဖိန်းဓာတ်၏နှိုးဆွမှုကိုအကျိုးသက်ရောက်စေသည်။ Nat Neurosci 2005; 8: 858-859 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
လာဇရုကို M က, Shen hy, Cherasse Y ကို, Qu WM, Huang က ZL, ဘေ့အဒေီ et al။ ကဖိန်းဓာတ်၏ Arousal အကျိုးသက်ရောက်မှုသည်နျူကလိယ accumbens ၏အခွံရှိ adenosine A2A receptors ပေါ်တွင်မူတည်သည်။ J ကို Neurosci 2011 ခုနှစ်, 31: 10067-10075 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Ferre S, Ciruela F, Woods AS, Lluis C, ဗဟိုအာရုံကြောစနစ်အတွင်းရှိ neurotransmitter receptor heteromers ၏ Franco R. Functional ဆက်စပ်မှု။ ခေတ်ရေစီးကြောင်း Neurosci 2007; 30: 440-446 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Azdad K, Gall: D, Woods AS, Ledent C, Ferre S, Schiffmann SN ။ Dopamine D2 နှင့် adenosine A2A receptors တို့သည် A2A-D2 receptor heteromerization မှတဆင့် accumbens အာရုံခံဆဲလ်များတွင် NMDA-mediated စိတ်လှုပ်ရှားမှုကိုထိန်းညှိ။ Neuropsychopharmacology 2009; 34: 972-986 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Trifilieff P ကို, Rives ML, Urizar အီး, Piskorowski RA, Vishwasrao HD ကို Castrillon J ကို et al။ ကိုပဲ interaction က၏ detection ဟောင်း Vivo အဆိုပါ striatum အတွက် endogenous dopamine D2-adenosine A2A အဲဒီ receptor ရှုပ်ထွေးသော: Proximity ligation assay ဖြင့်ပြုလုပ်နိုင်ပါတယ်။ ဇီဝနည်းပညာ 2011; 51: 111-118 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
ကဖိန်းဓာတ်၏ psychostimulant သက်ရောက်မှုအတွက်ဗဟိုတက်ကြွ neurotransmitter စနစ်များ၏ Ferre အက်စ်အခန်းက္ပ J ကိုအယ်လ်ဇိုင်းမား Dis 2010; 20 (Suppl 1): S35-S49 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Fredholm BB, Battig K, Holmen J, Nehlig A, Zvartau EE ။ ဦး နှောက်တွင်းရှိကဖိန်းဓာတ်ပါ ၀ င်မှုများကို ၄ င်းကိုကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုမှုကိုအထောက်အကူပြုသောအချက်များကိုအထူးရည်ညွှန်းသည်။ Pharmacol ဗြာ 1999; 51: 83-133 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Solinas M, Ferre S, You ZB, Karcz-Kubicha M, Popoli P, Goldberg SR ။ ကဖိန်းဓာတ်သည်နျူးကလီးယပ်၏အခွံတွင် dopamine နှင့် glutamate ထုတ်လွှတ်မှုကိုဖြစ်ပေါ်စေသည်။ J ကို Neurosci 2002; 22: 6321-6324 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Acquas E, Tanda G, Di Chiara G. အစိတ်ကြွဆေးများနှင့်ကဖိန်းဓာတ်ကြိုတင်ကုသထားသောကြွက်များ၏ ဦး နှောက်နယ်မြေများတွင် dopamine နှင့် acetylcholine ဂီယာများသို့ကဖိန်း၏ကွဲပြားသောသက်ရောက်မှုများ။ Neuropsychopharmacology 2002; 27: 182-193 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
De Luca MA၊ Bassareo V၊ Bauer A၊ Di Chiara G. Caffeine နှင့် shell dopamine ။ J ကို Neurochem 2007 ခုနှစ်, 103: 157-163 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Kaasinen V, Aalto S, Nagren K, Rinne JO ။ လူ့ striatum နှင့် thalamus တွင်ကဖင်းဓာတ်၏သက်ရောက်မှု။ Neuroreport 2004; 15: 281-285 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Volkow ND, ဝမ် GJ, မုဆိုး JS, Logan J ကို, Schlyer: D, Hitzemann R ကို et al။ လူ့ ဦး နှောက်တွင် [11C] raclopride နှင့်အတူ endogenous dopamine ယှဉ်ပြိုင်မှုကိုပုံဖော်သည်။ Synapse 1994; 16: 255-262 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
ဝမ် GJ, Volkow ND, Hitzemann RJ, Wong ကနေ C, Angrist B, Burr, G et al။ ပုံမှန်ဘာသာရပ်များနှင့်ကိုကင်းကျူးလွန်သူများအတွက်သွေးကြောသွင်း methylphenidate ၏အပြုအမူနှင့်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ။ Eur စွဲသူ 1997; ၃: ၄၉-၅၄ ။ | ဆောင်းပါး |
Fischman MW, Foltin RW ။ လူသားများတွင်မူးယစ်ဆေးဝါးများ၏အလွဲသုံးစားမှုတာဝန်ယူမှုကိုအကဲဖြတ်ရာတွင်ပုဂ္ဂလဒိeffects္ - အကျိုးသက်ရောက်မှုများကိုတိုင်းတာသည်။ Br J ကိုစွဲ 1991; 86: 1563-1570 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Liguori A၊ Hughes JR၊ မြက်ဂျေအေ။ ကော်ဖီ၊ ကိုလာနှင့်ဆေးတောင့်များမှကဖိန်းဓာတ်၏စုပ်ယူမှုနှင့်သီးသန့်သက်ရောက်မှုများ။ Pharmacol ထဲကဓာတုပစ်စညျး Behav 1997; 58: 721-726 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Tanaka E. မြင့်မားသောစွမ်းဆောင်ရည်အရည် Chromatography အားဖြင့်ကလာပ်စည်းနှင့်လူ့ပလာစမာတွင်၎င်း၏အဓိက demethylated metabolites များကိုတစ်ပြိုင်နက်ဆုံးဖြတ်ခြင်း။ J ကို Chromatogr 1992; 575: 311-314 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Hitzemann R ကို, Logan J ကို, Schlyer DJ သမား et al။ dopamine D2 receptor ရရှိနိုင်မှုလျော့ကျခြင်းသည်ကိုကာကိုလာအလွဲသုံးစားပြုသူများတွင်တိုကျရိုကျဇီဝြဖစ်ပျက်မှုနှင့်ဆက်စပ်နေသည် Synapse 1993; 14: 169-177 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Lelo A၊ Birkett DJ၊ Robson RA၊ Miners JO ။ လူ၏ caffeine နှင့်၎င်း၏အဓိက demethylated metabolites paraxanthine, theobromine နှင့် theophylline ၏နှိုင်းယှဉ်သော pharmacokinetics ။ Br J ကို Clin Pharmacol 1986; 22: 177-182 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Friston KJ, Holmes က AP, Poline JB, Grasby PJ, Williams က SC, Frackowiak သည် RS et al။ fMRI အချိန် - စီးရီး၏သုံးသပ်ခြင်းပြန်လည်လည်ပတ်။ Neuroimage 1995; ၂: ၄၅-၅၃ ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Logan J, Fowler JS, Volkow ND, Wang GJ, Ding YS, Alexoff DL ။ PET အချက်အလက်များ၏ဂရပ်ဖစ်ခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှသွေးမပါဘဲဖြန့်ဝေအသံအတိုးအကျယ်အချိုး။ J ကို Cereb သွေး Flow Metab 1996; 16: 834-840 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Volkow ND, Wang GJ, Fowler JS, Tomasi: D, Telang အက်ဖ်စွဲ - dopamine ဆုိုင်ရာတိုက်နယ်ထက်ကျော်လွန်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံ USA 2011; 108: 15037-15042 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed |
Tzourio-Mazoyer N ကို, Landeau B, Papathanassiou: D, Crivello က F, Etard အို Delcroix N ကို et al။ MNI MRI Single- ဘာသာရပ် ဦး နှောက်၏ macroscopic ခန္ဓာဗေဒ parcellation သုံးပြီး SPM အတွက် activations ၏အလိုအလျောက်ခန္ဓာဗေဒတံဆိပ်ကပ်ခြင်း။ Neuroimage 2002; 15: 273-289 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Martinez: D, Slifstein M က, Broft တစ်ဦးက, Mawlawi အို Hwang DR, Huang က Y ကို et al။ positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူလူ့ mesolimbic dopamine ဂီယာ Imaging ။ အပိုင်း II ကို: အ striatum ၏အလုပ်လုပ်တဲ့ subdivisions အတွက် amphetamine- သွေးဆောင် dopamine လွှတ်ပေးရန်။ J ကို Cereb သွေး Flow Metab 2003; 23: 285-300 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Iizuka Y၊ Sei Y၊ Weinberger DR, Straub RE ။ အဆိုပါ BLOC-1 ပရိုတိန်း dysbindin dopamine D2 အဲဒီ receptor အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့်အချက်ပြ modulates ပေမယ့်မ D1 ကိုအပြောင်းအလဲ။ J ကို Neurosci 2007; 27: 12390-12395 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Bartlett SE, Enquist J ကို, Hopf အက်ဖ်ဒဗလျူ, Lee က JH, Gladher က F, Kharazia V ကို et al။ Dopamine တုန့်ပြန်မှုကို D2 receptors များအားပစ်မှတ်ထားခြင်းဖြင့်ထိန်းချုပ်သည်။ proc Natl Acad သိပ္ပံ USA 2005; 102: 11521-11526 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | CAS |
Ginovart N ကို, Wilson က AA ကို, Hussey: D, Houle S, Kapur အက်စ် D2- အဲဒီ receptor upregulation D2- ထေို၏ယာယီသင်တန်းအပေါ်သို့မှီခိုသည်: ကြောင်များတွင် longitudinal [11C] -raclopride ပေလေ့လာမှု။ Neuropsychopharmacology 2009; 34: 662-671 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Xu ZC, Ling G, Sahr RN, Neal-Beliveau BS ။ တစ်ဖက်သတ် dopamine ကွယ်ပျောက်သွားပြီးနောက် striatum ရှိ dopamine receptors ၏အချိုးမညီပြောင်းလဲမှုများ။ Brain Res 2005; 1038: 163-170 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
လီ Y ကို, ရွိုင်း bd, ဝမ် W က, Zhang က L ကို, Zhang က L ကို, Sampson SB et al။ dopamine D ကို (2) အဲဒီ receptor နှစ်ခု function ကွဲပြားကွဲပြား endosomal ပြန်လည်လမ်းကြောင်း၏မှတ်ပုံတင်။ J ကို Neurosci 2012; 32: 7178-7190 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Hillion J ကို, တူးမြောင်း M က, Torvinen M က, Casado V ကို, Scott R ကို, Terasmaa တစ်ဦးက et al။ coaggregation, cointernalization နှင့် adenosine A2A receptors နှင့် dopamine D2 receptors တို့၏ codesensitization ။ J ကို Biol Chem 2002; 277: 18091-18097 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Borroto-Escuela DO, Romero-Fernandez W, Tarakanov AO, Ciruela F, Agnati LF, Fuxe K. ဖြစ်နိုင်ချေရှိသော A2A-D2-beta-Arrestin2 ရှုပ်ထွေးမှု - D2 agonist - သွေးဆောင် beta-arrestin2 စုဆောင်းမှု၏ A2A agonist modulation ။ J ကို Mol Biol 2011 ခုနှစ်, 406: 687-699 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Huang L, Wu DD, Zhang L, Feng LY : D (2) အဲဒီ receptor အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာနှင့် ERK phosphorylation အပေါ်တစ် ဦး က (2) တစ် ဦး အဲဒီ receptor ရန်၏မော်ဂျူ။ Acta Pharmacol Sin 2013; 34: 1292-1300 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Biaggioni I, Paul S, Puckett A, Arzubiaga C. Caffeine နှင့် theophylline တို့သည်လူသားများတွင် adenosine receptor ရန်ဘက်များဖြစ်သည်။ J ကို Pharmacol Exp Ther 1991; 258: 588-593 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Schwierin B, Borbely AA, N6-cyclopentyladenosine နှင့် caffeine တို့၏ကြွက်များတွင်အိပ်စက်ခြင်းကိုထိန်းချုပ်သည့်အပေါ်သက်ရောက်မှု။ Eur J ကို Pharmacol 1996; 300: 163-171 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Ferre S က, Ciruela က F, Borycz J ကို, Solinas M က, Quarta: D, Antony K သည် et al။ Adenosine A1-A2A receptor heteromers - ဦး နှောက်ထဲမှာကဖိန်းဓာတ်အတွက်ပစ်မှတ်အသစ်တွေ။ ရှေ့ Biosci 2008; 13: 2391-2399 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Dassesse: D, Massie တစ်ဦးက, Ferrari ပြိုင်ကား R ကို, Ledent ကို C, Parmentier M က, Arckens L ကို et al။ adenosine A (2A) receptors ချို့တဲ့တဲ့ကြွက်တွေမှာ striatal hypodopaminergic လုပ်ဆောင်မှု။ J ကို Neurochem 2001; 78: 183-198 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Volkow ND၊ Wang GJ, Fowler JS, Tomasi D. စွဲလမ်းမှုလူ့ ဦး နှောက်တွင်။ Annu ဗြာ Pharmacol Toxicol 2012; 52: 321-336 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Dews PB, O'Brien CP, Bergman J. Caffeine: ရုပ်သိမ်းခြင်းနှင့်ဆက်စပ်သောပြissuesနာများ၏အမူအကျင့်ဆိုင်ရာသက်ရောက်မှုများ။ အစားအစာ Chem Toxicol 2002; 40: 1257-1261 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Levant B, Grigoriadis DE, De Souza EB ။ dopamine D2 နှင့် D3 receptors ရှိ dopaminergic ဆေးများ၏နှိုင်းယှဉ်မှုများ။ Eur J ကို Pharmacol 1995; 278: 243-247 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Searle, G, Beaver အဘိဓါန် JD, Comley RA, ဗာနိ M က, Tziortzi တစ်ဦးက, Slifstein M က et al။ dopamine D3 receptors ကိုလူ့ ဦး နှောက်တွင် positron ထုတ်လွှတ်မှု tomography၊ [11C] PHNO နှင့်ရွေးချယ်ထားသော D3 receptor ရန်ပုံရိပ်တို့ကိုပုံဖော်သည်။ Biol စိတ်ရောဂါကုသမှု 2010; 68: 392-399 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Cameron OG၊ Modell JG၊ Hariharan အမ်ကဖိန်းနှင့်လူ့ ဦး နှောက်သွေးစီးဆင်းမှု - positron ထုတ်လွှတ်ခြင်း tomography လေ့လာမှု။ Life Sci 1990; 47: 1141-1146 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Vidyasagar R ကို, Greyling တစ် ဦး, Draijer R ကို, Corfield DR, Parkes LM ။ ဒေသတွင်း ဦး နှောက်သွေးစီးဆင်းမှုကိုလက်ဖက်ရည်ကြမ်းနှင့်ကဖိန်းဓာတ်၏သက်ရောက်မှုသည်သွေးလွှတ်ကြောလည်ပတ်မှုတံဆိပ်ကပ်ခြင်းဖြင့်တိုင်းတာသည်။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab 2013; 33: 963-968 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Kodaka က F, Ito က H ကို, Kimura Y ကို, Fuji က S, Takano H ကို, Fujiwara H ကို et al။ [2C] MNPA နှင့် [3C] raclopride နှင့်အတူ PET ဖြင့်တိုင်းတာသည့်လူ့ ဦး နှောက်တွင် dopamine D11 / 11 receptor ကိုစည်းနှောင်ထားသောစမ်းသပ်မှု - ပြန်လည်စစ်ဆေးခြင်း Eur J ကို Nucl Med Mol Imaging, 2013; 40: 574-579 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Volkow ND, မုဆိုး JS, ဝမ် GJ, Dewey SL, Schlyer: D, MacGregor R ကို et al။ လူ့ ဦး နှောက်ထဲမှာကာဗွန် -11-raclopride binding ၏ထပ်ခါတလဲလဲအစီအမံ၏မျိုးပွား။ J ကို Nucl Med 1993; 34: 609-613 ။ | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
Alakurtti K ကို Aalto က S, Johansson JJ, Nagren K ကို Tuokkola T က, Oikonen V ကို et al။ မြင့်မားသော resolution ကို positron ထုတ်လွှတ် tomography နှင့်အတူ [2C] raclopride သုံးပြီး binding striatal နှင့် thalamic dopamine D11 အဲဒီ receptor ၏မျိုးပွား။ J ကို Cereb သွေးစီးဆင်းမှု Metab 2011; 31: 155-165 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI |
Riksen NP, Rongen GA, Smits P. Acute နှင့်ကော်ဖီ၏နှစ်ရှည်နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာဆိုးကျိုးများ - နှလုံးသွေးကြောဆိုင်ရာရောဂါအတွက်အကျိုးသက်ရောက်မှုများ။ Pharmacol Ther 2009; 121: 185-191 ။ | ဆောင်းပါး | PubMed | ပါကစ္စတန်စစ်ထောက်လှမ်းရေး ISI | CAS |
ကျနော်တို့ကသူတို့ပံ့ပိုးမှုများကို Colleen Shea, ပေါ်လင်း Carter က, ကရင် Apelskog နှင့်ရုဗင် Baler ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ဒါဟာသုတေသန NIH ရဲ့ Intramural သုတေသနအစီအစဉ် (NIAAA) ကထောက်ခံခဲ့သည်။